गोबिन्द केसीलाई पक्रन लगाउने प्रधानन्यायाधीसकै किर्ते नागरिकता, कसले गर्ने कारवाही ? (प्रमाणसहित)
ARCHIVE, INVESTIGATION, SPECIAL » गोबिन्द केसीलाई पक्रन लगाउने प्रधानन्यायाधीसकै किर्ते नागरिकता, कसले गर्ने कारवाही ? (प्रमाणसहित)
काठमाडौँ - गोबिन्द केसीलाई अदालतको मानहानी गरेको भन्दै पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने आदेश दिने प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सेवा प्रवेशताका भन्दा फरक विवरण उल्लेख भएको नागरिकताको प्रतिलिपि न्यायपरिषद्मा पेश गरेका छन् । ५८ दिन प्रधानन्यायाधीश हुने मौका पाएका पराजुली यहि किर्ते नागरिकताले मान्यता पाएपछि थप ८ महीना २७ दिन सो पदमा बस्नेछन् ।
नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले ६५ वर्षसम्म पदमा रहेर काम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीशले अवकाश पाउँदै आएका छन् । ६५ वर्षे उमेर हद पार गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण २४ जेठ २०७४ मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाएकी थिइन् ।
यसअघि न्यायपरिषद्ले कायम गरेको नागरिकताको विवरण अनुसार पराजुली प्रधानन्यायाधीशको पदमा जम्मा ५८ दिन बसेपछि ६५ वर्ष पुग्ने हुनाले २० साउन २०७४ मा अवकाश पाउने थिए । तर, उनले पेश गरेको नागरिकताको प्रतिलिपिमा उल्लिखित जन्ममितिले मान्यता पाएको भन्दै उनी १५ वैशाख २०७५ सम्म (करीब ११ महीना) प्रधानन्यायाधीश पदमा रहनेछन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं स्रोतका अनुसार, पराजुलीले २५ माघ २०३४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकालेका थिए त्यसमा पनि जन्ममितिबारे सबै व्यहोरा पुरानै उल्लेख छ । तर, ३३ वर्षपछि ९ मंसीर २०६७ मा आएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाटै पराजुलीले अर्को प्रतिलिपि निकाले । सो प्रतिलिपिमा (नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर १८०३÷४४१÷३०१०) भने जन्ममिति १६ वैशाख २०१० उल्लेख छ । यसरी शुरूमा नागरिकता प्रमाणपत्र बनाएको ३७ वर्षपछि पराजुलीले जन्ममिति उल्लेख गरेर नागरिकताको प्रतिलिपि प्रमाणपत्र किन निकाल्नुप¥यो ? भावी प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल निर्धारण गर्ने यो दस्तावेजमा किन तलमाथि गर्नुप(यो ? चासोको विषय भएको छ ।
पराजुली २०३१ सालमा नेपाल ल क्याम्पसमा सीएल (सर्टि्फिकेट इन ल) तहमा भर्ना (कक्षा रोल नम्बर ११८) भएका थिए । विद्यार्थीको नाम, ठेगाना, जन्ममिति, पिताको नाम जस्ता व्यक्तिगत विवरणहरूको अभिलेख राखिने रजिष्ट्ररमा अहिले पराजुलीसहित उनीभन्दा तलमाथिका गरी चार जना विद्यार्थीको पुरानो विवरण पूरै छोपिएको छ । नयाँ कागजमा जन्ममितिसहितका अन्य नयाँ विवरण भरेर पुरानो माथि टाँस गरिएको छ । जसका कारण उनले भर्ना हुँदाका बखत लेखिएको विवरण देख्न सकिंदैन ।
जन्ममिति फरक पर्ने समस्या धेरै नै आएपछि त्यसको समाधान खोज्न १ माघ २०६१ मा नेपाल सरकारले एउटा नीतिगत निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा ‘न्यायपरिषद् ऐन २०४७ र न्यायपरिषद् कार्य्विधि २०५६ बमोजिम न्यायाधीशको उमेर कायम गर्ने र अनिवार्य अवकाशको सूचना दिने काम न्यायपरिषद् सचिवालयले नै गर्ने हो’ भन्दै उमेर कायम गर्ने आधार तय गरिएको थियो ।
निर्णयमा ‘निजले (न्यायाधीश वा कर्मचारीले) पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा किटान गरिएको जन्ममिति वा वर्षबाट हुन आउने उमेर वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटान गरिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर र वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेरमध्ये जुन आधारबाट गणना गर्दा पहिले अवकाश हुन्छ, सोही आधारमा उमेरको गणना गरिनेछ’ भनिएको थियो । यसको जानकारी निजामती किताबखानाले पत्र लेखेर न्यायपरिषद्लाई दिएको थियो । पछि २०६३ सालमा आएर नेपाल सरकारको त्यही निर्णयका आधारमा न्यायपरिषद्ले ‘जेठो उमेर नै मान्य हुने’ निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा परिषद्ले देवेन्द्रराज शर्मा, फणीन्द्रदत्त शर्मा तथा विष्णुप्रसाद पौडेललगायत अन्य न्यायाधीशहरूलाई अवकाश दियो । यीमध्ये देवेन्द्रराज र फणीन्द्रदत्तले त न्यायपरिषद्को निर्णय चित्त नबुझाएर सर्वोच्च अदालत नै गुहारे, तर सर्वोच्चले पनि न्यायपरिषद्कै निर्णयलाई सही ठहयायो ।
एउटा उदाहरणस् देवेन्द्रराज शर्मा
पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा दरबन्दी भई पुनरावेदन अदालत पाटनमा कार्यरत रहेका बेला न्यायाधीश देवेन्द्रराज शर्माले जन्ममिति सम्बन्धी यस्तै विवादमा सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए । २४ चैत २०२८ मा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिंदा उनको उमेर २५ वर्ष लेखिएको थियो । सेवा प्रवेश गर्दा शुरूमा सोही नागरिकता पेश गरेका कारण न्यायपरिषद्ले उनको जन्म २४ चैत २००३ कायम गरेको थियो ।
खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि तुफान न्यौपानेले तयार पारेको रिपोर्ट ।